Yunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa: “Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa: “Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise”
Yunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa: “Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise”
Barattoota Yunvarsiitii gadhiisanii bahaa jiran
(bbcafaanoromoo)—-Barattoonni Yunvarsiitii Saayinsiifi Teeknolojii Adaamaa mooraa gadhiisanii gara maatii isaaniitti galaa jiru.
Qajeelfama barnootaa irratti hundaa’uunis barnoonni seemisteera kanaa akka adda citee barattoonni mooraa gadhiisanii bahan senetiin yuunivarsiitichaa murteessuun isaa ni yaadatama.
Yunvarsiitichi walga’ii seenetiin booda xalayaa akka lakkoofa Itoophiyaatti gaafa Amajji 12, 2011 baaseen murtee kana beeksiseera.
Sababa du’a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa poolisiin qorataa jira
Murtee yunvarsiitichaa irratti hundaa’uunis barattoonni mooraa yunvarsiitichaa gadhiisuun gara maatii isaaniitti galuu eegalaniiru.
Barattoonni gara maatii isaaniitti galaa jiran BBCtti akka himanitti, yeroon barnootaa semisteerri tokko faayidaa malee qisaasa’ee gara maatiitti deebi’uun akka isaan gaddisiise himan.
Dabalataan gaaffiin du’a barattoota sadii yeroo darbe mudate irratti gaafatame baruumsi marroo biraaf akka adda citu sababa ta’uu barattoonni ni himu.
Barumsi addaan cituuf kan sababa ta’e gaaffii dhimmoota gara garaa irratti ka’ee ture jedha barataa Injiinaringii waggaa shanaffaa kan ta’e Qalbeessaa Haata’uu.
Keessattuu dhimma barattoota yunivarsiitichaa sadan mooraa keessatti du’anii argamanii ilaalchisee gadda keenya ibsanna kan jedhuun barnooti dhaabbate jedha.
“Barnoota addaan kutuun dhiibbaa baayyee qaba kan jedhu barataan kun barataan of danda’ee baratu hin jiru; kan abbaan hojii dafqaan bulaan dafqee barsiisutu jira.”
“Kan haati itti daldaltee, qoraan itti cabsitee barsiistufaatu jira”, jedha.
“Kanaaf, eenyullee mucaan koo barana naaf eebbifama jedhee eeggata. Amma fakkeenyaaf ani barataa bara kana keessa eebbifamudha. Maatiin na eegaa jiru.”
“Ani mataan koo bara kana eebbifamee bara egere yoona kana waanta tokkorran ga’a jedheen baayyee ariifannaa guddaadhaan eegaa jira.”
Sagantaan keenya eegaleera…
– Baratoonni Yunvarsiitii Adaamaa maaliif manatti deebi’aa jiru?
– Dhimma loltoota Itoophiyaa fi al -Shabaab…
– Gabaasa falmisiisaa Mana Maree Mirga Namoomaa Itoophiyaa…
– Odeessaalee biroo waliin….
DHIMMA HIDHANO WBO IRRAATI ABBOOTI GADAA OROMOO ACTIVISITOONI OROMOO AKKASUMA HAYYOTA OROMOO HOOGANTONI ABO YOO WARANI
The Retreat of African Democracy-The Autocratic Threat Is Growing